शालिकराम जम्कटेलको प्रश्‍न : प्रचण्डलाई कमजोर पारेर पार्टी एकता जोगिन्छ त ?
प्रदेश-३ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता शालिकराम जम्कटेलले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कमजोर पारेर पार्टी एकता नजोगिने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो धारणा राख्दै पछिल्लो समय पार्टीबाट अध्यक्ष प्रचण्डलाई एक्लो बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
उनले पार्टीभित्रका पूर्वमाओवादी पक्ष एक ढिक्का भएर अध्यक्ष प्रचण्डलाई समर्थन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष हुँदा बीचमा बसेर खेल्ने, एकता गराउने नाममा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने, प्रतिशोध साध्ने प्रवृति बढेको उल्लेख गर्दै त्यो प्रवृतिलाई अवसरबादका रूपमा अर्थ्याएका छन् । उनले ७ वटा बुँदामा आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्दै 'अध्यक्ष प्रचण्डलाई किन कमजोर बनाउन खोजिँदै छ ? स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका नेताहरू किन चुप लागेर बसेका छन् ?' भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
यस्तो छ उनको धारणा
मेरो यो धारणा पार्टी एकता कमजोर पार्न र गुटबन्दीलाई बढवा दिनको लागि होइन । एकतालाई मजबुत बनाउनको लागि नै हो । अहिलेको अनतरसंघर्षमा म एकदम स्पष्ट छु । सबै नेताहरूलाई म उत्तिकै सम्मान गर्दछु । कसैले यसलाई गलत तरिकाबाट भजाउन पनि सक्दछन ।
आन्दोलनमा विचार, नेतृत्व र संगठको महत्वलाई ठीक ढंगले बुझ्नु पर्दछ आज नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्षमा विशेष गरी पूर्वमाओवादीतर्फका तल्लोस्तरका कार्यकर्ता र समर्थक जनमानसहरूको एउटै धारणा छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रका पूर्वमाओवादी पक्ष किन एक ढिक्का हुन सकेन ? अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई किन कमजोर बनाउन खोजिँदै छ ? स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका नेताहरू किन चुप लागेर बसेका छन् ? अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई कमजोर पारेर पार्टी एकता जोगिन्छ त ?
(१) पार्टी एकता जोगाउन अध्यक्ष वरिपरि नै पूर्वमाओवादी धार केन्द्रित हुनु पर्दछ ।
(२) कतिपय स्थायीय समितिका सदस्य कमरेडहरूको भावना राम्रै होला तर अध्यक्ष कमरेडको त्यत्रो त्यागलाई अपमान गर्ने, उहाँको कुरा नसुन्नेले तपाईंहरूको कुरा पत्याएर एकता जोगाइदिनु हुन्छ ।
(३) समीकरणले बिग्रिएको छैन । समीकरण बनाउन कोसिस कसले गरेको छैन ?
(४) अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको प्रवृति अहिलेको पार्टीको समस्या होइन ? विगतका इतिहासहरू साक्षी छन् । उहाँ त समाधान हो ।
(५) अन्तरसंघर्ष हुँदा बीचमा बसेर खेल्ने, एकता गराउने नाममा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने, प्रतिशोध साध्ने प्रवृति देखिन्छ । त्यो अवसरबाद हो । त्यो प्रवृति समाप्त हुन्छ ।
(६) अहिलेको पार्टी को अन्तरसंघर्ष वैचारिक नै हो । हामी आफूलाई कुन विचारमा उभ्याउने ? समाजवादमा पुग्ने वैचारिक आधार कुन हो ?
(७) कमीकमजोरीको समीक्षा गर्दे जाउला पूर्व माओवादी पक्ष अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको वरिपरि एकताबद्ध बनौ । उहाँले अगाडि बढाउने सबै कदमहरूलाई साथ दियौँ । संकटको बेलामा मौन भएर कोही पनि नबसौँ । यतिखेरको हाम्रो मतले विशेष अर्थ राख्नेछ । तब मात्रै पार्टी एकता जोगिने छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, १७ साउन २०७७, २१:१३:००